Lahatsary vaovao ao ambadiky ny seho amin'ny vanim-potoana faharoa an'ny Home Before Dark | Avy amin'ny mac aho
Tamin'ny 11 Jona dia nanao premiere tamin'ny Apple TV + l izyamin'ny vanim-potoana faharoa ny andiany ho an'ny tanora, tsy an-jaza, Home Before Dark, andiany manaraka ny dian'ny tanora mpanao gazety Hilde Lisko sy ny rainy tamin'ny famotorana natao tamina tanàna tsy fantatra izay nifindra toerana vao haingana.
Taorian'ny zava-nitranga tamin'ny vanim-potoana voalohany, ny andiany dia mitaky ny tolona ataon'ny tarehin-tsoratra a loza ateraky ny tontolo iainana ateraky ny orinasa tsy fantatra. Apple dia nandefa tamina fantsona YouTube ny horonantsary vaovao any ambadiky ny seho amin'ity vanim-potoana faharoa ity izay mampahafantatra antsika ny vanim-potoana faharoa ilay mahery fo.
Amin'ity vanim-potoana faharoa ity dia fizarana 10, toy ny voalohany ihany. Amin'izao fotoana izao, ny fizarana roa voalohany ihany no misy. Isaky ny zoma Apple dia hanampy fizarana vaovao mandra-pahatapitry ny vanim-potoana faharoa.
Raha efa nankafizinao ny vanim-potoana voalohany, alohan'ny hanombohanao mankafy ny faharoa dia azonao atao ny mijery ny fizarana 1 indray ampiasain'i Apple ho an'ny mpamandrika Apple TV + hamelombelona ny fitadidiany.
Ho an'ny vanim-potoana fahatelo an'ny Home Before Dark, dia nanao sonia ilay mpilalao sarimihetsika ireo mpamokatra andiany Alexa mansour, fantatra amin'ny anjara asany tamin'ny fihodinan'ny The Walking Dead.
Amin'izao fotoana izao tsy misy vaovao Midika izany fa efa nosoniavina tamin'ny vanim-potoana fahefatra izy, fa raha raisina ny andiany voafetra hita ao amin'ny Apple TV + ary ny Home Before Dark dia voarain'ny mpitsikera sy ny besinimaro tsara, dia azo inoana fa ny vanim-potoana dia tsy ny farany ary amin'ny ho avy dia hanana tantara bebe kokoa momba an'i Hilde Lisko izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Lahatsary vaovao ao ambadiky ny seho amin'ny vanim-potoana faharoa an'ny Home Before Dark